21 Sep, 2018 - 00:09	 2018-09-20T20:38:59+00:00 2018-09-21T00:02:17+00:00 0 Views
MAKADINI? Ndiri mukadzi ane makore 31, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora. Zvizhinji tinotaura pa0782 546 942.
Ndinodawo musikana wekuroora mhandara mudzidzisi kana mukoti ane makore 18 kusvika 30, ndogara muHarare uye ndinoshanda. Ndine makore 30, vanoda ndibatei pa0715 315 589.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa, ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichidzika. Ndine vana 3, anoda ngaandibate pa0779 939 059.
Ini ndiri mukomana ane makore 30 nemwana 1. Ndiri HIV negative uye ndinotsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 25 asina mwana kana ane mwana 1. Nhare yangu 0775 720 675.
Makadini? Ini ndiri single hangu asi ndongoda shamwari yekupakurirana nayo mazano kwete zvekuroorana saka angava mukadzi kana murume. Ini ndine 35 makore, ndatenda. Vanoda ndibatei pa0777 728 528.
Makadiiko veTishamwaridzane? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa, ndinotsvakawo musikana kana mukadzi ane mwana 1. Ngaave anoshanda nekuti ini ndinoshandawo. Andidawo ngaandibate pa0715 445 896.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 30 zvichidzika uye ari pamushonga. Ndogara muHarare, ndibatei pa0735 051 758.
Ndiri murume ane makore 29, ndinodawo mukadzi ane mwana 1 kana asina, ngaave ane makore ari pasi peangu. Ndoda asina chirwere, anoda ngaandibate pa0773 452 457.
Ndiri murume ane makore 43 nevana 3, ndinotsvagawo mukadzi uye anondida ngaandibate pa0784 426 439.
VeKwayedza makadii? Murume ane makore 51, HIV+, anogara kumusha anodawo mukadzi. Nhamba 0771 465 924.
Makadii? Ini ndiri mudzimai ane vana vatatu, ndiri kutsvakawo shamwarirume yezera neni. Ndinogara muHarare, anondida anondibata pa0776 183 773.
Ndinoda mukadzi ari HIV negative ane makore 20 – 35. Ndinoita basa remaoko, ndiri muHarare. Asina mwana kana ane mumwe chete ndibate pa0774 775 053.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ari kudawo mukadzi akasimba mukobvu ane mari dzake asi ini handina mari. Ndoda ari negative ari serious, andida ngaandibate pa0719 697 105.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1 ndodawo murume wekufambidzana naye ari pamushonga ane makore 30 zvichidzika. Anondibata pa0784 215 697.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 33 ndotsvagawo murume akanaka ane moyo une rudo asiri pamushonga. Ndine vana 2, nhare yangu 0783 017 437.
Makaita basa veKwayedza, ndakazomuwana wandaida nenyasha dzaMwari saka vachiri kufona pa0779 288 677 chiregai zvenyu.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 23, HIV positive uye ndiri kutsvagawo mukomana ari pachirongwa ane makore 24 kusvika 27. Nhamba dzenhare 0715 298 977.
Ndiri murume ane makore 35, handina chirwere uye ndinotsvagawo mudzimai anoda zvokuroorwa ane makore 25 kusvika 30. Andida anondibata pa0775 174 963.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 26 nevana vaviri uye ndogara muHarare. Ndotsvagawo murume ari pakati pemakore 30-35 anogeza, anoenda kuchechi. Vanoda kutamba kana vane vakadzi kwete. Nhare yangu 0718 477 632.
Makadii zvenyu veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 30, ndinotsvagawo murume. Ndine mwana 1, nhare yangu 0774 703 509.
Makadini? Ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 22 kusvika 24 ane mwana 1 uye asina HIV. Anondibata pa0777 578 335.
Ndine makore 33 uye ndotsvakawo mudzimai akarongeka ane makore 30 kusvika 45. Vanoda fonai pa0782 651 574.
Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20 – 34. Andida ngaandibate pa0772 980 774.
Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo mukadzi anodawo zvemba ane vana kana asina. Ngaave ane makore 23 – 33. Vandifarira vanofona pa0718 336 363.
Ndodawo musikana kana mudzimai akavimbika, anogeza, anofarira zvokunamata uye ari pachokwadi. Ndine makore 33 saka ndodawo ane makore 22 – 27. Mondibata pa0783 867 087.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye. Andifarira ngaafone kana kutumira sms, zvakawanda totaura pa0785 922 028.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye asi ngaave wekwaMutare uye ari serious. Ndinobatika pa0775 314 175.
Ndiri murume ane makore 47 nemwana 1 akura. Ndinodawo mudzimai anoda zvemba ane makore 46 – 47. Nhare yangu +27 619 227 230.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 asiri pamushonga uye ndinotsvagawo musikana ane makore 23 zvichidzika. Andida ngaandibate pa0784 433 129.
Makadii vedare? Ndiri murume ane makore 25, ndinoda mudzimai ari serious ari HIV negative. Ngaave ari kwaGutu, Bikita kana Buhera. Nhamba dzangu 0778 539 636.
Makadini? Ndiri murume ane makore 33, ndiri kutsvaka mukadzi ari pasi pemakore 25 mutete, mutsvuku uye anotya Mwari ane rudo. Ndinobatika pa0771 245 670.
Ndiri murume ane makore makumi mana nemana, ndinotsvaka mudzimai wekuroora ane makore 35 – 45. Ngaave ane vana vake 2 kana 3, ndinobataika pa0771 897 314.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndinotsvakawo murume ane makore 26 kusvika 34 asiri pachirongwa ane rudo runopfuta moto. Ndingafara mukandishambadzawo, nhare yangu 0782 360 665.
Ndiri mukomana ane makore makumi matatu nemaviri, ndinotsvagawo musikana wekuroora. Ndinogara kuKaroi, nhare yangu 0775 619 397.
Ndiri mukadzi ane makore 37 nemwana 1, HIV positive uye ndinodawo murume ane makore 42 – 47 ari positive achinwa mushonga zvakanaka. Ngaave asinganwi doro, asingasvuti fodya uye ari kwaMutare. Nhare yangu 0716 408 570.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 30, ndinodawo murume wekuvaka naye imba akavimbika nekuti ndaneta nematsotsi. Ndiri HIV negative uye ndine vana vatatu. Nhare yangu 0771 517 505.
Makadii weKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi asi vanoda zvedambe kwete. Ndinoshanda, handisi pachirongwa uye ndonamata. Nhare yangu 0776 519 710.
Ndiri mukadzi ane makore 40, handina mwana uye ndotsvaga murume wokuvaka naye musha. Nhamba dzangu 0785 847 609, ndopinda Z.C.C uye zvizhinji tozotaura.
Ndiri kutsvagawo musikana wokuroorana naye mutsvuku ane makore 27 zvichidzika. Ndine makore 30, anoda ngaandibate pa0779 621 112.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana mutsvuku akanaka ane makore 18 kusvika 21 ari HIV negative. Ndinowanikwa pa0773 190 577.
Ndinokukwazisai veTishamwaridzane. Ndiri murume, 36 makore angu. Ndine chishuwo kushamwaridzana nemudzimai akarurama parunako, pakuwirirana nepahutano, nyenyedzi inopenya zvinoyevedza, anoyemurika sekuumbwa kwakaita bhodhoro reCoca-cola, nekufashukira nemazirudo ane huromba. Ndakamumirira pa0712 774 011.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nevana 2 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo murume anoda zvemba, andifarira ngaandibate pa 0785 138 204.
Ndiri murume ane makore 39, ndotsvagawo mukadzi ane rudo, mukobvu asina chirwere uye ane mari yake. Ndinoda ane chero api makore, chero asisabereki. lni handishande parizvino. Andifarira ndibate chero nguva pa0715 390 069.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 47 uye ndinotsvagawo murume ane makore 48 zvichikwira ari pamushonga seni. Nhamba dzangu 0777 239 112.
Makadii? Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvagawo musikana ane makore 24 kusvika 31 asiri pamushonga kana ane mwana 1. Andifarira nhare yangu 0778 058 836.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume anoshanda uye asiri kumaruwa. Ngaave akadzidzawo seni. Ndinobatika pa0785 332 404.